Imizekelo ye-Moodboard ukukukhuthaza | Abadali be-Intanethi
Imizekelo ye-Moodboard ukuze ikukhuthaze
Iris Gamen | 04/04/2022 22:00 | Ukuphefumlelwa
Nayiphi na iprojekthi yokuyila onayo ezandleni zakho kufuneka ihambe kwinkqubo yokudala i-moodboard. Ukufumana isitayela esibonakalayo esiyingqayizivele kunye nesihambelanayo, ukuphumeza ibhodi yesimo sesinye sezigaba ezinzima kakhulu, kodwa kwakhona inxalenye apho izinto eziza kwahlula uphawu olunye ukusuka kwenye zifumaneka.
Kule posi, sifuna ukuthetha nawe malunga noku ubuchule bokuyila, obusikhokelela ekuphuhliseni indalo ebonakalayo ngokusebenzisa iimbekiselo kwaye, siya kukubonisa imizekelo yemoodboard, ukuze uqonde ngendlela ebonwayo le nto sithetha ngayo.
iibhodi zengqondo, Ngokuqhelekileyo zenziwe ngeefoto, imibala, ukuthungwa, iifonti, ukusika, njl., iseti yeembekiselo ezisikhuthazayo kwaye zingaphakathi kwejelo lemilinganiselo esifuna ukuyihambisa.
1 Yintoni enhle ngokusebenzisa i-moodboard?
2 Eyona mizekelo yeBhodi yeMood
2.1 ibhodi yemo yoyilo lwangaphakathi
2.3 I-Moodboard kwintengiso kunye noyilo
3 Izixhobo zedijithali zokwenza ibhodi yemood
Yintoni enhle ngokusebenzisa i-moodboard?
Ayisiyiyo kuphela le ndlela isetyenziswa kwihlabathi loyilo, ikwasetyenziselwa ukuyila kwangaphakathi, ukuququzelela umcimbi, ukuqokelela imfashini, ukufota iifoto, njl. Ngamafutshane, kwi nayiphi na iprojekthi enomelo olubonakalayo.
Sisixhobo esiphambili kwiinkqubo zokuyila, sisixhobo esiluncedo kakhulu, ukusukela oko Ngayo, iziseko zesazisi esibonakalayo oza kusebenza ngaso zibekwe. Yindlela eguqukayo ngakumbi, ngaphakathi kwenkqubo yophando kunye namaxwebhu, ekufuneka yenziwe phambi kwesigaba soyilo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, inyathelo lokuqala ngaphambi kokuqamba i-moodboard yiba nombono ocacileyo wento ofuna ukuyiphumeza ngophawu osebenza nalo, ngombono osisiseko uphendlo lweziqalelo luya kujoliswa ngakumbi.
Enye inkalo ekufuneka igxininiswe kukuba Ayiyiyo yonke into eyongezwe kwi-moodboard ibonakala kuyilo lokugqibela. Ngamanye amazwi, ukuba ukhethe imibala emi-3, akufuneki ukuba ibonakale yonke, ikunika isikhokelo kwi-palette ehambelana kakuhle nobuntu bophawu.
Eyona mizekelo yeBhodi yeMood
Njengoko sele sichazile, ubuchule be-moodboard ikuvumela ukuba ukhuphe izimvo ozinikwa yibrendi kubathengi, okanye ukukhuthaza nje umntu. Nantsi imizekelo embalwa eyahlukileyo yokukunika inkuthazo.
ibhodi yemo yoyilo lwangaphakathi
Akunyanzelekanga ukuba sibe ziingcali kuyilo lwegraphic okanye lwangaphakathi ukuze sikwazi ukusebenza ngobu buchule, nawuphi na umsebenzisi angayenza xa efuna inkuthazo yeprojekthi, nokuba uhlaziywa ngokutsha igumbi, ukudala umsebenzi okanye nokutshintsha kwenkangeleko.
Kweli candelo, i-moodboards yoyilo lwangaphakathi zingenye yezona zinto ziqhelekileyo esinokuziqwalasela, kuzo zivela izinto ezinxulumene nokuhlobisa, ukuthungwa, imibala, ifenitshala, njl.. Kufuneka nje uqokelele imifanekiso evuyisayo kwaye ihambelane nemibono yethu.
I-Moodborad kunye nefashoni zizinto ezimbini ezihamba kunye, ziyi isixhobo esibalulekileyo kweli candelo xa ulungiselela ingqokelela. Abaqulunqi kunye neqela labo bajongene nokudala ikholaji ngokudibanisa imifanekiso eyahlukeneyo, amalaphu kunye nemibala ebonisa ukuphefumlelwa kwee-textile presses. Le ndlela yokujonga inceda ukunika ubomi kwiziqwenga, ukwazi ukuba zinokujongeka njani phambi kokuba zenziwe.
Njengoko besesitshilo, izinto ezibonakala kwimiba yee-moodboards zefashoni ngamalaphu, ukuthungwa, imibala, ukugqitywa, imizobo yazo zombini iimpahla kunye neemodeli, iifoto, ukuphefumlelwa kwe-makeup, njl.
I-Moodboard kwintengiso kunye noyilo
Kwicandelo lezentengiso kunye nemizobo yobugcisa, Olu buchule lunye lwamanyathelo okuqala athathiweyo, kuba ngalo lonke ulwazi olunikezelwe ngabathengi kwiqela loyilo luqokelelwa. malunga nendlela abayiyo, into abayiyo kunye nento abafuna ukuyidlulisela.
Yiyo ubuchule obubonakalayo obuphezulu obunceda ukuzisa umbono emhlabeni, enkosi kwizinto ezahlukeneyo eziyiqambayo. Kuyanceda ukubonisa abathengi ngendlela ebonakalayo kunye neyobonwayo, apho umsebenzi, ingcamango, iya kuhamba khona. I-moodboard yindawo yokuqala yengcamango kwaye yintoni eya kukhokelela kuyilo lokugqibela.
Ukudala ibhodi yesimo sengqondo kuya kuthatha ixesha, kodwa uya kukwazi ukwakha isikhokelo esibonakalayo esiya kukunceda uphawule ingcamango kwaye ubone ukuba umphumo wokugqibela uya kuba njani.. Yeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ndlela isebenzayo yokubonisa ngendlela ebonakalayo, ukunxibelelana ngokubonakalayo kunye nabathengi, ngoncedo lwale ngqokelela yezinto ungabonisa indlela iprojekthi ehamba ngayo.
Xa uqala iprojekthi, into yokuqala ngawo onke amagama, amaphepha kunye neengcamango, ezinokuthi zidideke. Enkosi kwimoodboard, ufikelela ezo ngcinga zivelayo kunikezelo lwengcaciso kwaye ikuvumela ukuba ube nomfanekiso ngqondweni wemiba ekuye kwaxoxwa ngayo, ngesitayile segrafiki.
Izixhobo zedijithali zokwenza ibhodi yemood
Kukho iindlela ezininzi zokudala iibhodi zengqondo, ukusuka kwindlela yezandla, ukusika amaphephancwadi, amaphephandaba, izinto eziphathekayo kunye nezinye, izixhobo zokwenza oko ngedijithali.
I-Illustrator okanye iPhotoshop yenye yezona nkqubo zisetyenziswa kakhulu kuyilo lwebhodi yemood. Unokukhetha ngokukhululekileyo imifanekiso, ukhethe ubungakanani, ubhale iikhonsepthi eziphambili naphi na, ukongeza imibala eyahlukileyo, njl.
Ukuba ungomnye wabo bathanda iPinterest, yenye yamaqonga apho unokufumana ezinye iimbekiselo, ngaphandle kweebhanki zemifanekiso. Kufuneka nje udale ibhodi, kwaye uqale ukugcina yonke imifanekiso ekuyo, zombini ukusuka ePinterest nakwezinye iiwebhusayithi.
I-Niice okanye i-Moodboard Lite, ngamaqonga amabini enziwe ngokukodwa ukwenza lula ibhodi mood. Kwenzeka okufanayo nge-Dragdis, nge-akhawunti kweli qonga kuya kufuneka utsale kwaye ulahle zonke izinto ezikukhuthazayo.
Njengokuba ubona, Zininzi iindlela zokwenza ibhodi yemood, kufuneka ukhethe indlela oziva ukhululekile ngayo. Kukho abo bakhetha yonke into yedijithali, kunye nabanye abakhetha ukuba nayo ngokwasemzimbeni kwaye bakwazi ukudlala.
Ukuba ufuna ukulinga ngezimvo ezibonwayo ngokukhawuleza, ubuchule be-moodboard bubo, kuba benza okuninzi khaphukhaphu kwaye kumnandi ngakumbi yonke inkqubo yophando kunye nokukhangela iireferensi.
Siyakukhuthaza ukuba uqale ukuzama, ukusika, ukukrazula, ukuncamathelisa... ngokuqinisekileyo uya kufumana elona cala lakho lokudala ngelixa wonwabile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imizekelo ye-Moodboard ukuze ikukhuthaze
Imbali kunye nendaleko emva kwelogo yePixar